सबै ब्रान्डको एक मात्र गन्तव्य, सहर भित्रको सहर हो सिजी ल्यान्डमार्क
१२ माघ २०७७, सोमबार १०:०१
उज्वल केसी मल म्यानेजर
भरतपुरमा सिजी ल्यान्डमार्क सञ्चालनमा आएको १६ महिना भएछ । यसबीचमा तपाईंहरुको अनुभव कस्तो रह्यो ?
हामी एकदमै उत्साहित छौं । चितवन बासीको चाहना र हाम्रो उद्देश्य बीचको तालमेलले यो उत्साहको मुख्य कारण हो । हामीले मुलुककै केन्द्र भागमा विशाल क्षेत्र ओगटेको तथा अन्यत्रको तुलनामा तीव्र गतिमा आधुनिकतातिर लम्किरहेको चितवनमा सुविधासम्पन्न र विश्वस्तरको सपिङ् मलको आवश्यकता महसुस गरेर सिजी ल्यान्डमार्क सञ्चालनमा ल्याएका थियौं । जुन कुरा चितवनवासीको चाहना नै थियो ।
के छ यसमा त्यस्ता अनौठा चिज र चितवनबासीले किन रुचाए त ?
पहिलो कुरा त सिजी ल्यान्डमार्क देशकै केन्द्र भाग चितवनको मुटु मानिने भरतपुरमा छ । सरकारी काम लिएर आउनेदेखि किनमेलका लागि आउने सम्मका लागि भरतपुर गन्तव्य हो । सुगमता यसको एउटा विशेषता रह्यो । त्यसका अलावा सिजी ल्यान्डमार्कले आफूलाई विश्वविख्यात विदेशी र स्वदेशी ब्रान्डहरु एकै ठाउँमा पाइने गन्तव्यको रुपमा स्थापित गरेको छ । यी दुवैले गर्दा स्तरीय वस्तु र सेवाको चाहना गर्ने व्यक्तिहरुको मन जित्न सक्यौं ।
विश्वविख्यात ब्रान्ड भन्नुभयो, के के छ सिजी ल्यान्डमार्कमा ?
यहाँ विश्वविख्यात ब्रान्ड नाइक, एडिडास, पुमा, पिटर इंग्ल्यान्ड, जिनीजोनी, युएस पोलो, बेनेट्टोन, लिनिब, स्केचर्स, युसुप्सो, पेपे जिन्स, मेडम, कन्भर्स, भ्यान्स, एप्पल, सामसब, एलजी, ब्ल्याक क्याट, केएफसी, एन्टा, योनेक्स सबैका अथोराइज्ड आउटलेटहरु छन्। तपाईं सिजी ल्यान्डमार्कमा प्रवेश गरेपछि फेसन ब्रान्डदेखि गजेट्ससम्म, खानेकुरादेखि खेलकूदका सामग्री सम्मका विश्वप्रशिद्ध ब्रान्ड पाउन सक्नुहुन्छ । त्यसकारण यसले सबै किसिमका सहरी आवश्यकताको सम्बोधन गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ । यहाँ विश्वभर ख्याति कमाएका स्वदेशी ब्रान्डहरु डुल्ला, सोनम, नोभेम्बर, ब्ल्याक फरेस्ट, पपेट, सोरायास, केटिएम सिटी, कुपिड, रेड रिबन आदिका अथोराइज्ड आउटलेटहरु पनि छन्।
एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न । ग्राहकले आफूले पैसा तिरेको सामान राम्रो होस्, धेरै समय टिकोस्भन्ने चाहन्छ । ब्रान्डेड र
ननब्रान्डेडमा यही कुरा आउँछ । ब्रान्डेड सामानले कहिल्यै धोखा दिँदैन । मूल्य फिक्स हुन्छ । काठमाडौंमा किन्नुहोस पोखरामा किन्नुहोस चितवनमा किन्नुहोस। उही मूल्यमा पाइन्छ । गुणस्तर उही हुन्छ । ब्रान्डेड सामान ग्यारेन्टेड नै हुन्छन्। यिनीहरु टिकाउ हुन्छन्। हामीले उपभोक्तालाई यो ब्रान्ड भ्यालु पनि सिकाइरहेका छौं ।
होटल रेस्टुरातर्फ हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल फर्न रेजिडेन्सी, होटल चितवन यहाँ छ । नेपालकै प्रतिष्ठित सिनेमा हलसिनेप्लेक्स पनि यहीँ छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रेस्टुरेन्ट ब्ल्याक फरेस्ट, फुड प्लानेट, फर्न रेस्टुरेन्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्यांकेट हल पनि छ ।
अन्य सहरमा त होला, तर चितवनमा यति धेरै विश्वस्तरीय सुविधा र विशेषतायुक्त सपिङ् कम्प्लेक्स अर्को छैन । यहाँ आधुनिक सहरका सबै किसिमका सुविधा उपलब्ध रहेकाले हामीले यसलाई सहरभित्रको सहर भन्ने गरेका छौं ।
यहाँ कतिले रोजगारी पाएका छन्?
लगभग २०० जना छन्, प्रत्यक्ष रोजगारीमा । अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनामा पनि हामीले योगदान गरेका छौं ।
रोजगारीमा मात्रै होइन हामीले आर्थिक गतिविधिका लागि एउटा गज्जबको प्लेटफर्म तयार गरिदिएका छौं । जसले गर्दा चितवन जिल्लाबाट संकलन हुने राजस्वमा पनि उल्लेखनीय योगदान गरेका छौं ।
मैले अघि नै भनिसकें । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सपिङ् मल चितवनमा यो मात्रै हो । अन्त यति सुविधासम्पन्न सपिङ् मल छैन । किनमेल, गेट टुगेदर जस्ता कामको लागि तपाईं बाहिर जानुभयो भने पार्किङ् कता गर्ने भन्ने विषयमा घरबाट निस्कँदै योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँ आउने मान्छेहरुले यस विषयमा टाउको दुखाउनु पर्दैन । सुरक्षा गार्ड र सिसी क्यामेराले निगरानी गर्ने व्यवस्थित पार्किङ् छ । सहरी क्षेत्रको अर्को समस्या शौचालय हो । स–साना बच्चाबच्ची लिएर हिँड्दा होस् अथवा वयस्क व्यक्ति, व्यवस्थित शौचालय नभेट्दा कस्तो हैरानी खेप्नुपर्छ भन्ने तपाईंलाई थाहै छ । व्यवस्थित मलमा जाँदा ती विषयमा ढुक्क हुन पाइन्छ । सरसफाइ हेर्नुस्, उस्तै राम्रो हुन्छ ।